Fitsinjaram-pahefana : Hisokatra anio ny fihaonana an-tampon’ny AICT -
AccueilRaharaham-pirenenaFitsinjaram-pahefana : Hisokatra anio ny fihaonana an-tampon’ny AICT
05/03/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Hanomboka anio, ary haharitra telo andro. Hanampy ireo olom-boafidy malagasy amin’ny fanatanterahana ny adidiny ny fihaonana an-tampony faharoan’ny vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana frantsay sy Madagasikara, na ny AICT (Assises de la Coopération International des Collectivités Malagasy et Françaises), izay hotanterahina etsy amin’ny Carlton Anosy. Tafiditra tamin’ny fanomanana io fihaonambe handraisantsika vahiny an-jatony io, nidina teny amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny, nijery ifotony ny fikarakarana ny Praiminisitra Mahafaly solonandrasana ny sabotsy lasa teo. « Fotoana iray hifanakalozan-kevitra sy traikefa eo amin’ireo tompon’andraikitra eny anivon’ny vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana roa tonta io fotoana io. Hisitrahana ihany koa ireo tombontsoa entin’izany, toa ny fiaraha-maiasa amin’ny kaominina eto Madagasikara sy any Frantsa, ary hitondra ainga vao amin’ny fanamafisana orina ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara », araka ny fanazavana nentin’ny praiminisitra. Mety hisy araka izany fanaovan-tsonia na endrika fiaraha-miasa avy hatrany ho an’ny vondrom-bahoakam-paritra mbola tsy nisitraka izany.
Sehatra iray entina hametrahana paikady amin’ny fanatsarana sy fanamafisana orina ny fitsinjaram-pahefana ity hetsika ity. « Hanampy tosika ireo olom-boafidintsika amin’ny fanatanterahana ny adidiny ihany koa. Tsy fanomezam-pahefana fotsiny eny ifotony ny fitsinjaram-pahefana fa hita taratra amin’ny alalan’ny asan’ireo olona ireo ny famahana mivantana ireo olana eny ifotony, na ny ben’ny tanàna izany, na eny anivon’ny faritra », hoy hatrany ny fanamarihan’ny Praiminisitra.
Hodinihina mandritra ny 3 andro aharetan’ny fihaonana ny fitantanana ny loza voajanahary, ny fampandrosoana eny ifotony, ny fikojakojana ny rano sy ny fidiovana… « Entanina isika amin’ny fanehoantsika Malagasy mandray vahiny, ka hampanjaka ny fitoniana sy ny fahaizana mifehy ny fandriam-pahalemana », araka ny antso avo nataon’ny praiminisitra raha niresaka ity fihaonana mitovy lenta amin’ny frankôfonia ity. Olona 350 no andrasana amin’ity hetsika ity, ka manodidina ny 180 ny vahiny andrasana amin’izany.
Mitohy hatramin’ ny omaly ny fivoriana izay tanterahin’ireo vovonana maro an’isa ahitana ireo tompon’andraikitra maro eto amin’ ny firenena toa ny minisitra, solombavambahoaka, senatera, antoko politika maro isan-karazany manohana ny filoham-pirenena ankehitriny . Raha sy ...Tohiny